သြစတေးလျှဗဟိုဘဏ်သည် ငွေကြေးမူဝါဒများကို ယခင်အတိုင်းမပြောင်းလဲဘဲ ဆက်ထိန်းထားမည့်ပုံပေါ်နေပါသည်. ဗဟိုဘဏ်၏ငွေကြေးမူဝါဒများသည် သြစတေးလျှနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည်. သြစတေးလျှဒေါ်လာကို အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရာမှာ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်က အရေးပါသည့်အတွက် ဒီသတင်းကို လက်လွတ်မခံသင့်ပါ.
ယခင်နောက်ဆုံးအကြိမ်ဆွေးနွးပွဲတွင် မူဝါဒရေးဆွဲသူများအနေနှင့် အများကမျှော်မှန်းထားသည့် အချိန်ကာလထက်ပိုစောပြီး အတိုးနှုန်းတင်လိုသည့် အခြေအနေကို မြင်ခဲ့ကြရပါသည်. သို့သော် ဗဟိုဘဏ်အနေနှင့် အိမ်ထောင်စုများ၏ကြွေးမြီများမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် စားသုံးသူများ၏၀ယ်ယူသုံးစွဲမှုများကျဆင်းလာနေခြင်းအပေါ် အလွန်အားမလိုအားမရဖြစ်နေခဲ့ကြပါသည်. အော်ဇီဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်လာခြင်းနှင့် ပက်သက်ပြီး ဗဟိုဘဏ်အကြီးအကဲဖြစ်သူ Philip Loweကလည်းမကြာသေးခင်က ထုတ်ပြောသွားခဲ့ပါသည်.
စက်တင်ဘာလ ၅ရက်နေ့ ၀၇:၃၀ MT အချိန်တွင် ထုတ်ပြန်မည့် သြစတေးလျှဗဟိုဘဏ်၏ အတိုးနုန်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထရိတ်ဒါများက သတိထားစောင့်ကြည့်နေကြပါသည်. ထိုထုတ်ပြန်ချက်အပြီး သြစတေးလျှဒေါ်လာငွေလဲနှုန်း သိသိသာသာ လှုပ်ရှားပါလိမ့်မည်.